Industry Lists | MOIN
MYANMAR INDUSTRY PORTAL
Resources are Limited. Creativity is Unlimited.
No.6 Industrial Training Centre(Myingyan)
No.5 Industrial Training Centre(Magway)
No.2 Industrial Training Centre(Mandalay)
No.3 Industrial Training Centre(Thagaya)
No.4 Industrial Training Centre(Pakokku)
No.1 Industrial Training Centre(sinde)
No.1 Heavy Industrial Enterprise Subsidiary Factories
No. (1) Steel Mill (Myingyan)
No. (2) Steel Mill (Pangpet)
No. (14) Heavy Industry (Thagaya)
No. (15) Heavy Industry (Thagaya)
No. (16) Heavy Industry (Sinde)
No. (17) Heavy Industry (Malun)
No.2 Heavy Industrial Enterprise Subsidiary Factories
Plastic Factory (Kyaukse)
Rubber Product Factory (Thingangyun Street)
Asbestos Cement Factory (Hmawbi)
Asbestos Cement Factory (Kyaukse)
Fire Clay Brick Factory (Sawbwargi Gone)
Sheet Glass Factory (Pathein)
No (21) Heavy Industry (Thaton)
No (23) Heavy Industry (Nyaung Chi Dauk)
No (24) Heavy Industry (Dagon)
No (26) Heavy Industry (Thagaya)
No.(31) Heavy Industry (Tha Yet)
No.(32) Heavy Industry (Kyan Khinn)
No.(35) Heavy Industry (Chauk)
No.(36) Heavy Industry (Kyaukse)
No.3 Heavy Industrial Enterprise Subsidiary Factories
No.1 Textile Factory (Shwedaung)
No.3 Textile Factory (Sagaing)
Textile Factory Branch (Myingyan)
High-grade Paper Mills (Tha Baung)
Newsprint Paper Mill (Tha Baung)
Home Utilities Factory (Min Su)
Hydrogen Peroxide Factory (Chauk)
No.4 Textile Factory (Pwintphyu)
No.5 Textile Factory (Pakokku)
No.6 Textile Factory (Sarlingyi)
No.6 Textile Factory Branch (Monywa)
No.7 Textile Factory (Myitthar)
No.7 Textile Factory Branch (Wundwin)
No.8 Textile Factory (Pyawbwe)
No.8 Textile Factory Branch (Yamethin)
No.10 Textile Factory (Taungtha)
Myanma Pharmaceutical Industrial Enterprise Subsidiary Factories
Pharmaceutical Factory (Innsein)
Pharmaceutical Factory (Inyaung)
Pharmaceutical Factory (Ywar Thar Gyi)
Pharmaceutical Raw Material Factory Branch (Hmaw Bi)
Horse and Sheep Breeding Farm (He Ho)
မူလစာမျက်နှာ စက်ရုံများ အမှတ်(၃) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းရှိစက်ရုံများ
အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းသည် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံပိုင်စက်မှုလုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခင်အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း၊ ယခင်မြန်မာ့စက္ကူနှင့်ဓါတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ ယခင် မြန်မာ့အထွေထွေနှင့်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်းတို့ ပူးပေါင်းထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများ၏ ဘဏ္ဍာငွေများ လေလွင့်ဆုံးရှုံး ပျက်စီး ပျောက်ရှမှုနည်းအောင် ကွပ်ကဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် ကျဆင်းစေသော နည်းလမ်းများဖြင့် အကျိုးအမြတ် တိုးတက်ရရှိအောင် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် စက်ရုံများ၏ စီမံရေး၊ ထုတ်လုပ်ရေး၊ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတို့ကို ခွဲဝေပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊ မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ပေးခြင်း၊ ငွေကြေးခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးစေရန် ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ဦးတည်ချက်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ လမ်းညွှန်ချမှတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံများမှာ အထည်စက်ရုံ/စက်ရုံခွဲ (၁၂)ရုံနှင့် စက္ကူနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းစက်ရုံ/စက်ရုံခွဲ(၄)ရုံ၊ စုစုပေါင်း(၁၆)ရုံ ရှိပါသည်။
အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းအနေဖြင့် စက်မှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံပိုင် စက်ရုံများအား ပြည်တွင်း/ပြည်ပပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ခြင်းများနှင့် နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံများမှ အခြားဌာနများမှ အမှာစာရရှိသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ပဈေးကွက်ဝင် ရောင်းချနိုင်သော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် အောက်ပါစက်ရုံနှင့် လုပ်ငန်းဌာနများ ပါဝင်သည်-
Copyright © 2019 Myanmar Industry Portal . All rights reserved.